Alahady fanokafana ny faha-25 taona nitandremana – FJKM Ambavahadimitafo Alahady fanokafana ny faha-25 taona nitandremana |
A la une.Fanompoam-pivavahana.Jobily 25 taona Past. Alain Randrianarisoa.Randrianarisoa Alain.Toriteny
Publié le 03 mai 2022 à 01:05
Alahady 02 mey 2022 hibanjinan’ny FJKM ny lohahevitra amin’ity volana ity manao hoe « Manavao ny Fanahy Masina« ; nanokafana ihany koa ny Jobily faha-25 taona nitandreman »ny mpitandrina Randrianarisoa Alain.
Ny teny anorenana ny jobily dia ny Salamo 111 : 1b « Haleloia ! Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehatra aho ».
Manasa antsika hiombona amin’izany fanompoam-pivavahana izany :